Egypta: Nosakanan’ny Blogger ny bilaogin’i Nawara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2018 13:22 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Italiano, 繁體中文, 简体中文, हिन्दी, English
(Marihina fa tamin'ny 16 Novambra 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Toa hita fa tsy ny mpitondra amin'ny firenena tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa ihany no manakana ny bilaogin'ny olona. Toa hita fa nanapa-kevitra ny hanaraka ity fiaran-dalambin-dry zalahy ity ny Blogspot an'i Google, ary nanakana ny Bilaogin'i Nawara Negm (Tahyees), tsy nisy filazana antony manokana. Ary nanoratra momba ity tranga ity i Ahmed Shokeir eto:
Raha iny handeha hatory iny ny olona rehetra dia nahita hafatra nanaitra tao amin'i Jaiku ireo bilaogera izay milaza fa voasakana ny bilaogin'i Nawara Negms (Gabhet El Tahyees El Shaabeya) satria nandika ny fitsipika sy ny lalàna mifehy ny Blogger izy.
Nawara … Ary araka ny antontan'isa avy amin'ny Google Reader dia namoaka bilaogin-dahatsoratra miisa 24,7 isan-kerinandro izy, izany hoe lahatsoratra mihoatra ny 3,5 isan'andro. Olona iza no mahavita mamoaka lahatsoratra marobe toy izany izay feno hevitra sy fanadihadiana? Manana ny fomba fanoratany miavaka i Nawara satria manoratra amin'ny tenin-jatovo Arabo tsy nentim-paharazana izy.
Manantena aho fa hiverina tsy ho ela ny bilaoginy, aorian'ny fijeren'ny Blogger ny votoatiny, satria tsy misy na inona na inona ao amin'ny bilaoginy manitsakitsaka ny fitsipika sy ny lalànan'ny Blogger. Saingy hatramin'izao, samy miahiahy ny hiverenany ny tsirairay.